सिरानीमुनी लसुन राखेर सुत्दा के हुन्छ ? पढ्नुस् – NepalajaMedia
सिरानीमुनी लसुन राखेर सुत्दा के हुन्छ ? पढ्नुस्
March 13, 2021 256
लसुन विश्वको धेरैजसोे भान्सामा प्रयोग हुने मसला हो । खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन बाहेक लसुनलाई केही घरेलू उपचारमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ। लसुनको केही परम्परागत महत्व छन्, जसले नकारात्मक शक्तिलाई भगाउन सक्छ।
लसुनबाट धेरै क्यालोरिज पाइन्छ । सय ग्राम लसुनमा सयभन्दा बढी क्यालोरी पाइन्छ । त्यस्तै लसुनमा कार्बोहाइड्रट र प्रोटिन प्रसस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले हाम्रो शरीरिक तथा मानसिक दुवै स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ।
लसुनले संक्रमण तथा अपच र श्वासप्रश्वाको समस्यालाई ठिक पार्छ । लसुनमा पाइने ‘एन्टिअक्सिडेन्ट’ र ‘एन्टी–इन्फ्लामेटोरिज’ले मृटुलाई स्वास्थ्य राख्छ । लसुनले शरीरमा रहेको कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्छ र शरीरमा रक्तचाप प्रक्रियालाई ठिक र नियमित गराउँछ । लसुनले एन्टिबायोटिकभन्दा राम्ररी जीवाणुहरु मार्न सक्छ।
त्यस्तै, मिठो निन्द्रा लगाउँन लसुनलाई अर्को तरिका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक गिलास दुधमा एक पोटी लसुनलाई ट्क्राएर उमाल्नुहोस् । तीन मिनेटसम्म उमालेपछि सेलाउँन दिनुहोस् । अब एक चिनी चम्चा मह दुधमा मिसाएर पिउँनुहोस् । यद्यपि, राम्रो प्रभावका लागि तपाईले सुत्न ३० मिनेटअघि पिउँनुपर्ने हुन्छ।
Prevबृहस्पति ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै, यस्तो राशि भएका व्यक्तिलाई धेरै फाइदा
Nextकिसानले भेटाए अहिले सम्मकै ठूलो र अचम्मको गुफा, जसभित्र छ अनौँठो संसार